Maamulka Koofur Galbeed oo ka qeyb qaadanaya Ciidamada la qarameynayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka Koofur Galbeed oo ka qeyb qaadanaya Ciidamada la qarameynayo
11th October 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Baydhabo ( Mareeg)-Wasiirka Wasaaradda Dhaqan Celinta iyo hub ka dhigista Maleeshiyaadka Maamulka Koofur Galbeed Xasan Xuseen Max’ed ayaa ka warbixiyay ka qeyb qaadashada maamulkiisa ee Isku dhafka Ciidamada qaalabka sida Soomaaliyeed.
Mr Xasan Xuseen Wasiirka dhaqan Celinta iyo Hub ka dhigista maleeshiyaadka maamulka Koofur Galbeed ayaa carabka ku adkeeyay in maamulkooda Ciidamo ka tirsan ay ku biirinayaan Ciidamada dowladda dhexe ay qarameyneyso islamarkaana ay ka qeyb qaadan doonaan qorshayaasha lagu doonayo in dalka uu ku yeesho Ciidan Milatari oo la geeyo meelaha dagaalada iyo xiisadaha uga furan yihiin Gobollada dalka.
Ciidamadaan ayuu sheegay Wasiirku in tababarro ay ku qaadanayaan deegaanno hoostaga Gobolka Baay iyagoo loo carbin doono sidii ay Howlgal uga sifeyn lahaayeen meelaha Al Shabaab ay weli uga sugan yihiin Gobollada Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa indhawaanahaan ku howlaneed qorshayaal isku dhaf ay ugu sameyneyso Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo laga soo kala xulayo Gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya.
Nuruddin Farah: ‘I write about Somalia to keep it alive’
Targeting Non-Communicable Diseases